Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Roberto Carlos Child Story Story na-emeghe akụkọ ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Brazil Legend onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Nwoke mgbo'. Anyị Roberto Carlos Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ntugharia ya bu ihe omuma nke ndu ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya, ndu ya na ndi ozo di iche banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọsọ ya na ụkwụ aka ekpe ya na-egbu egbu mana ole na ole na-ele Roberto Carlos 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mbido
A mụrụ Roberto Carlos da Silva Rocha na ụbọchị 10 nke Eprel 1973 na Garça, São Paulo, Brazil. Amuru ya nne ya, Vera Lucia da Silva na nna, Oscar da Silva. Carlos toro n'ezinụlọ dara ogbenye.
Dịka ọtụtụ ụmụaka Brazil ndị ọzọ, Roberto hụrụ football n'anya ma kpọọ ya mgbe ọ bụla o nwere oge. Ọ maliteworị ọrụ n'oge 12 iji nyere ezinụlọ ya aka. Carlos rụrụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ na-edozi aha ụlọ ọrụ bụ Torsao Cardeiro.
Ebube ya dị ka ndị ịgba ọsọ ụkwụ na-enwusi ka ọ gbawara Atletico Mineiro dị na Brazil.
Na 1992, n'agbanyeghị igwu egwu na ihe a hụrụ dị ka obere osisi (União São João) ma bụrụ naanị afọ 19, a kpọrọ ya maka otu ndị otu mba Brazil. Nke a bụ mmalite nke ụdị ike na ọgba aghara nke bọọlụ Brazil. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Onye na-egwu bọl Brazil malitere ịlụ Alexandra Pinheiro. Ha abụọ kewara mgbe afọ 12 gasịrị.
Alexandra Pinheiro mụrụ ụmụ atọ mara mma maka Roberto Carlos.
Mgbe nkewapụrụ ya, Carlos malitere ịkwụ ụgwọ alimoni maka nwunye mbụ Alexandra Pinheiro. Na 2003, di na nwunye ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta nke Carlos ga-akwụ ihe dịka $ 36,000 kwa ọnwa nke ụgwọ ezumike mgbe Alexandra bi na Spain, bụ ebe ọ na-egwuri egwu maka Real Madrid ruo 2008. Ka ọ laghachiri na Brazil na 2005, e megharịrị uru ahụ. Roberto Carlos akwụsịghị ịkwụ ụgwọ ego maka ụmụ ya. O mezuru ọrụ ya niile dị ka nna [ọgbụgba ndụ ahụike, ụlọ akwụkwọ, uwe na nri maka ụmụ ya].
Carlos n'agbanyeghị ịkwụ ụgwọ, nọgidere na-agbaso ihe mgbaru ọsọ ya nke ịmaliteghachi na ụmụ nwanyị dị iche iche, nke dugara ya ka o nwee agbapụ asatọ “Isii ma ọ bụ asaa” ndi di iche iche.
Roberto Carlos mechara biri na Mariana Luccon na 2009. Ha abụọ ghọrọ ezigbo ndị enyi na ndị hụrụ ha n'anya.
Roberto Carlos na Mariana Luccon lụrụ na afọ ahụ. Mgbe ọ lụsịrị alụmdi na nwunye, ọ kwagara Brazil iji nọgide na-agba bọl.
Na mbu, Roberto Carlos nwere umu 8. Sonsmụ nwoke anọ na ụmụ nwanyị anọ bụ Luca Da Silva Rocha, Carlos Eduardo Da Silva Rocha, Roberta Da Silva Rocha, Giovanna Da Silva Rocha, Roberto Carlos Júnior Da Silva Rocha, Rebeca Da Silva Rocha, Christopher Da Silva Rocha, Manuela Da Silva Rocha. Kaosinadị, n’October 2017, mgbe ọ dị afọ 44, ọ ghọrọ nna nna mgbe nwa ya nwanyị mbụ bụ Giovanna mụrụ nwa nwoke. N'okpuru ebe a bụ foto nke nwa nwanyị mbụ nke Roberto Carlos.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ Ezinụlọ
A mụrụ Roberto Carlos n'ezinụlọ ndị Katọlik. Ndị nne na nna abụọ bụ Oscar Da Silva na Vera Lucia Da Silva bụ ndị Katọlik dị ike. Roberto Carlos bụ nanị otu nwa nke ezinụlọ ya.
Roberto Carlos nwere ụmụnne nwanyị abụọ bụ, Cristiane Da Silva Rocha, Silvia da Silva Rocha.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ogbugba osisi
Onye ọ bụla nwere àgwà ụfọdụ a na-echeta ha. A na-echeta Roberto Carlos maka ihe karịrị nanị ịtụ egwu ndị na-emegide ha; ọ bụ mpempe akwụkwọ mgbasa ozi ya.
A kpọrọ ya aha El Hombre Bala ("The Bullet Man") n'ihi ike ya na-agba free kicks free, nke a tụrụ na ihe karịrị 105 kilomita kwa awa (169 km / h). Nke a bụ nwoke nwere ike gbaa bọọlụ na ọsọ egwu nke nwere ike itinye ihere ka ihere.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Onye na-eme ihe ike
Na 24 June 2005, ndị oji egbe abụọ zuru ohi Roberto Carlos mgbe ha na-agba ajụjụ ọnụ na redio. Ọ bụ ezie na ndị ohi ahụ merụrụ ndị mmadụ ahụ na redio, ha nwere ọmịiko n'ebe Carlos nọ n'ihi nkwanye ùgwù ha nwere maka akụkọ akụkọ Brazil. Naanị ha were elekere dị oke ọnụ ya na ekwentị onye na-agba ajụjụ ọnụ.
Na ihe omume a mere na 2005 mgbe mgbasa ozi ọha na eze abụghị ndị a ma ama dị ka ọ dị ugbu a, ya mere, ọ bụghị ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndị Na-emerụ Ahụ Ike
Na March 2011, n'oge egwuregwu na-aga Zenit Saint Petersburg, a na-eme otu banana dị nso na Carlos site n'aka otu n'ime ndị Fans dị ka ndị na-eto eto na-ekere òkè n'ememe ọkọlọtọ.
Na June n'otu afọ ahụ, na egwuregwu na Krylia Sovetov Samara, Roberto Carlos natara ikike site n'aka onye na-eche nche ma na-achọ ịgafe ya mgbe a tụbara ya banana.
Mgbe ahụ, ihe Roberto Carlos ghọrọ isiokwu nke ọtụtụ otuto. O weghaara banana ahụ, tụba ya n'akụkụ n'akụkụ ya wee gawa n'ubi ozugbo ahụ ma na-ebuli mkpịsị aka abụọ n'akụkụ ebe ahụ, na-egosi ọnụ ọgụgụ nke oge ọ nwetara okwu agbụrụ na Russia.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Personality
Roberto Carlos nwere àgwà ndị a na-agbaso àgwà ya.
Ike Roberto Carlos: Obi ike, kpebisie ike, obi ike, ịnụ ọkụ n'obi, nchekwube, n'eziokwu na ịdịiko.
Akwụsị Roberto Carlos: Enweghị ndidi, obi ọjọọ, onye dị mkpụmkpụ, onye na-enweghị isi na onye na-eme ihe ike.
Ihe Roberto Carlos nwere mmasị: Uwe obi iru ala, na-eburu ọrụ ndu, ihe ịma aka, egwuregwu ọ bụla.
Ihe Roberto Carlos achọghị: Enweghị ike, igbu oge, ọrụ nke na-ejighị talent mmadụ
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Inweta Robinho na Madrid
Na 2 August 2005, ọ nwetara ụmụ amaala Spanish na Brazil. Nke a dị mkpa maka Real Madrid, dịka ọ pụtara na ọ gụrụ ugbu a dị ka onye European Union player, mepee otu n'ime oghere atọ nke klọb maka ndị na-abụghị ndị EU ma mee ka Real nwee ike ịbanye na kpakpando ndị Brazil ọzọ Robinho.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Onyinye a magburu onwe ya
Roberto Carlos kwuru na ọ ga - akwụ Real Madrid n'efu ma ọ hapụsịrị Fenerbahce. Otú ọ dị, dị ka Real nwere Marcelo, ha akpọghị ya azụ-nke a mekwara ka ọ bụrụ ngọzi na ngbanwe.
Carlos gara Russia na-akpọ Anzhi Makachkala, bụ ebe onye nwe ụlọ ahụ na-akwanyere ya ùgwù.
Onye nwe ụlọ ahụ, bụ Suleyman Kerimov, bụ nnukwu onye na-akwado ya nke na ọ nyere ya Bugatti Veyron maka ụbọchị ncheta ọmụmụ 38th-nke dị afọ ise gara aga n'ụbọchị a. Kedu oge ngwa ngwa gafere? Dị nnọọ ngwa ngwa na mma, nke ahụ bụ n'ezie.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Onye na-edekọ Ihe
Alfredo di Stefano bụ Ezigbo ihe nkiri Real Madrid. O nyeere ndị otu aka mmeri 5 European Cups n’usoro ma bụrụ onye kachasị egwu nke oge ya. O mere ọtụtụ ndekọ maka Real Madrid, ụfọdụ n'ime ha ka dị taa.
Otú ọ dị, Roberto Carlos mebiri otu n'ime ihe ndekọ ya na January 2006 mgbe ọ na-akpọ 370 yath Egwuregwu La Liga dị ka onye ọkpụkpọ Real Madrid - na-eme ka ọ bụrụ onye na-egwu egwu na mba La Liga, bụ nke Alfredo di Stefano dere tupu nke a.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -A mara ya mkpọrọ
A mara onye ikpe na-agbachitere iko ụwa Roberto Carlos ikpe na ọnwa atọ n'ụlọ mkpọrọ na obodo ya Brazil mgbe ọ kwụsịrị ịkwụ ụgwọ karịa £ 15,000 na nkwado ụmụaka.
Nke mbụ Real Madrid a kwuru na a ga-eji 61,000 Real (£ 15,148) kwụ ụgwọ na XNUMX Real (£ XNUMX), bụ nwanyị nwanyị bụ Barbara Thurler, bụ nne nke ụmụ ya abụọ. Roberto Carlos na-ekwu ugbu a na ya nwere nsogbu ego ma kwụọ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ego ahụ, ihe otu onye ikpe ahụ jụrụ.
A na-enye Carlos ọsọsọsọ mkpọrọ, n'agbanyeghị na ọkàiwu ya kwupụtara na a ga-edozi okwu ahụ n'enweghị ya iji nweta oge n'azụ ụlọ.
Roberto Carlos Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Esonyere Birmingham
Ị nwere ike iche ihe gaara eme ma ọ bụrụ na Carlos na-egwuri egwu na England? Ọfọn, ọ dị nnọọ nso ịbụ eziokwu.
Mgbe o meriri ihe mgbaru ọsọ ụwa mbụ ya maka Brazil na Goodison Park megide Japan na 1993 - egwuregwu nke Brazil meriri 3-0-ọ na-ahụ anya nke ndị Birmingham scouts na ha nwere mmasị ịbanye ya. Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Roberto Carlos Child Story akụkọ na eziokwu ndị dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Ifiedbọchị agbanwee: November 3, 2020